Proverbe Mason--tsokina : izay any ny tena kely ahiratra. [Cousins 1871 #1652]
Mason--tsokina : izay an' ny tena kely ahiratra. [Veyrières 1913 #2208]
Mason--tsokina, ka izay an' ny tena kely ahiratra. [Houlder 1895 #1367]
Mason--tsokina ka ny an' ny tena kely no ahiratra. [Rinara 1974 #2160]
Mason--tsokina ka ny kely ananana no ahiratra. [Rajemisa 1985 #35]
Mason--tsokina, masom--boalavo, izay kely ananana ahiratra. [Veyrières 1913 #844]
Mason--tsora, mason--tsokina : ny kely ananana ahiratra. [Samson 1965 #M89]